Nizeria : Tsy misy izay ilàna azy ny Masoivoho Frantsay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jona 2008 14:44 GMT
Adeola Aderounmu mpiblaogy Nizeriana no manapariaka ao amin'ny Thy Glory O Nigeria..! [Izato lazanao ry Nizeria ô ..!] mihevitra fa tsy misy izay ilàna azy ny Masoivoho Frantsay any Nizeria :
A recent case at the French embassy in Nigeria is still causing a source of agitation in my mind and here I will narrate the story.
Wale will attend a professional course in Switzerland for 3 weeks starting June 16. At the end of the course, the school is offering a school trip to Paris by bus […]
The embassies have a silly rule that keeps a failed applicant away for minimum 15 days.
“Fa mba inona loatra no antom-pisian'ireny ireny Masoivoho vahiny any Nizeria ireny e ? Inona loatra no antony mahatonga ireo “zara raha nianatra” izay miasa ao amin'ireny Masoivoho ireny mandà ny zo fototra izay ahafahan'ireo manam-pahaizana Nizeriana mangataka fazahoan-dàlana “visa” mba hamangiany firenena maro any Eorôpa sy toerana maro hafa ?”
Tantara vao nitranga tsy ela tao amin'ny Masoivoho Frantsay no nahatonga ahy hanoratra toy izao, indro atolotro anareo ilay tantara.”
I Wale dia hamonjy fiofanana hoan'ny olona efa am-perin'asa any Soisa izay haharitra 3 herinandro sady manomboka amin'ny 16 Jiona. Amin'ny fiafaran'izany fiofanana izany dia misy dia mankany Parisy izay oemn'ny sekoly ireo mpiofana […]”
Mametraka làlana adaladala ireo Masoivoho izay tsy mamela ireo mpangataka visa izay efa nolavina ny hametraka fangatahana visa vaovao mandritra ny tapa-bolana.”